သက်ဝေ: ကမ္ဘာပျက်ချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းခြင်း
pandora October 26, 2009 at 9:39 PM
အဲ.. အတည်ပေါက်ကြီးဆိုတော့ ဘယ်လို မန့်ရပါ့။ အဲလို မလုပ်နဲ့လေ.. ဒီက ဟန်လုပ်နေရတာ.. ကျောချမ်းလာဘီ။
Yu Ya October 26, 2009 at 10:08 PM
ဟောဗျာ.. ငါသည် မုချသေရမည်တဲ့.. နည်းနည်းလွဲနေသလိုပဲနော်...အဟီး။
Rita October 26, 2009 at 10:39 PM
တကယ်ကြီးလား ၂ဝ၁၂ ကိစ္စက။
အကြွေးတွေ တကယ် လိုက်တောင်းထားတော့မယ်။
လင်းဒီပ October 26, 2009 at 10:46 PM
လူသန်းခြောက်ထောင်ကျော် သေရမယ့်ဘေးဆိုတော့ ကပ်ကတစ်ခုတည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်..။
တချို့နေရာတွေမှာေ၇တွေကြီး တချို့နေရာတွေမှာ မုန်တိုင်းတွေ တချို့နေရာတွေမှာ ငလျင်တွေလှုပ် တချို့နေရာတွေမှာ မီးတွေလောင်...အောင်မငီး လျှောက်ရေးရင်း လန့်လာပြီ..:P
Thant October 26, 2009 at 10:49 PM
အတွေးတွေတော်တော်များများတူတယ်..။ အေးလေ..နော့ ။ အေးဆေးပဲ ။ ( ကျောချမ်းလာပြီ အဟီးးးးးးး )
sonata-cantata October 26, 2009 at 10:59 PM
ကိုအောင်သာငယ် တဂ်လို့ ရေးပြီးပြီရှင့်...
သက်ဝေကတော့လေ တကယ်ရီရတယ်...ကမ္ဘာကြီးပျက်မဲ့အချိန် သူ့အသက်က အကြီးကြီးမဟုတ်သေးဘူး တဲ့...။
အောက်ဆုံး ဆက်တဂ်တော့မှ ပေါ်တာ...
ချစ်သူငယ်ချင်း မသီတာလို့ ရေးလိုက်မှတော့...
(ဒီက ဖော်ကောင်ကြီးက မနေ့တနေ့ကတင် လေးဆယ်ဘူတာရောက်ကြောင်း ကျေငြာမောင်းခတ်ထားတာလေ...)
သင်းနွယ်ဇင်တို့ သိင်္ဂီတို့များ ပေါ်မှာစိုးလို့ ဘတ်ဒေးဝှစ်ရ်ှလေးတောင် လာမလုပ်ဘူး သိလား...
ကမ္ဘာမပျက်မီ အပြေးအလွှား အတင်းလာပြောရတာ
nu-san October 26, 2009 at 11:00 PM
အမရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီး ကျနော်သာဆို အဲဒီလောက် မတည်ငြိမ်လောက်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေးမိတယ်..
ဟိုတလောက 9/11 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး TV မှာ documentary လိုမျိုး ကြည့်လိုက်ရတယ်.. တချို့တွေ 9//11 မှာ သူတို့ မကြာခင်မှာ သေတော့မယ်ဆိုတာ သိတော့ အဖေက အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သမီးငယ်ငယ်လေး အတွက် မွေးနေ့သီချင်းဆိုပေးတာမျိုးတွေ၊ သားက သူ့ အမေဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး နှုတ်ဆက်စကားပြောတာမျိုးတွေ၊ လက်ထက်ပြီးသိပ်မကြာသေးတဲ့ လင်မယားကလည်း ဖုန်းဆက်ရင်း နှုတ်ဆက်နေတာမျိုးတွေ ပြန်ပြတာ ကြည့်ရတော့ စိတ်ထဲတမျိုးပဲ အမ.. သေရမယ်ဆိုတာ သေချာသိနေတော့ ရသမျှ အချိန်လေးမှာ အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်သွားနိုင်တာကို လေးစားရမလိုပဲ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သေရမှာကြိုသိရမယ်ဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် မိသားစုအတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ရော အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး လောကကြီးထဲကနေ ထွက်သွားချင်ပါတယ်.. သေရမှာကို မသိပဲ သေသွားမှာပဲ ကြောက်မိတယ်..
Anonymous October 26, 2009 at 11:05 PM
okn October 27, 2009 at 7:03 AM
ကျွန်မတော့ ဘာမှ လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး အဲဒီ ဂြိုလ်က အခုဘယ်လောက် နီးလာပြီ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်အပိုင်းနဲ့ စတိုက်ပြီး ကမ္ဘကြီးက ဘယ်လို ၀င်ရိုးပြောင်းသွားမယ်၊ ဘယ်အပိုင်းမှာ မီးစလောင်ပြီး ဘယ်အပိုင်းမှာတော့ ရေလွှမ်းမယ် နောက်ဆုံးကျန်တာက ဘယ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်တယ် ဆိုတာ အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး အဖွဲ့တွေက တင်ဆက်နေနိုင်တဲ့ live show ပြတဲ့ အင်တာနက်ပဲ နေ့တိုင်း ထိုင်ကြည့်နေမယ်။ တလပဲ လိုတော့တယ်ဆိုတော့ မသေခင် တလတော့ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ တလစာ အစားအသောက် ကြိုဝယ်ပြီး ဒီလိုပဲ ထိုင်စောင့်တော့မယ်။
အောင်သာငယ် October 27, 2009 at 7:07 AM
အကိုလည်း tag ထားတာ နောက်ကျ သွားပါပကော...း(
အတည်ပေါက်ကြီးတော့ မစောင့်နေနဲ့နော... တော်ကြာ ဒေါက်တာကိုကို စိတ်ညစ်နေရဦးမယ်...း)
Nge Naing October 27, 2009 at 7:07 AM
ဆောရီး သက်ဝေရေ ခုနက မှတ်ချက်က အစ်မမှတ်ချက်ပါ။ အမျိုးသားက သူ့ Account ကို log off မလုပ်သွားလို့ မှားဝင်သွားတယ်။
Hmoo October 27, 2009 at 12:20 PM
Cool....but u can change later,..."every thing is changing,,, or can B change with time..situation..treatment of people or enviromental." :'P
4 me is oftenly I met that... my world is almost ,run away from me....so...if I knew the world is flee away from me B4 I leave him...I'll stop working & try2get back Human life...in short time.. :)
Most of the people lost their human life...until the day they die :) I love ur post &...
တန်ခူး October 27, 2009 at 1:03 PM
ချစ်တဲ့သက်ဝေ... ဟိုတနေ့ကပဲ အိမ်က ယောင်္ကျားကို ပြောနေတာ… ၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်မယ့်အတူတူ မြန်မာပြည်ပြန်နေရအောင်လို့ … သူက တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ တခါ အဲလိုတွေ အသဲအသန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲ… ဘယ်မှာဖြစ်လို့ လဲတဲ့… သူပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မှာပါလေဆို မေ့ထားလိုက်တဲ့ topic… သက်ဝေက တက်ဂ်တော့ ရေးရမှာပေါ့… လေနုအေးရဲ့ themeနဲ့ လွဲနေလို့ခေါင်းစဉ်လေး နဲနဲပြင်ပါရစေ… ကမ္ဘာကြီးကျန်းမာစေဖို့ လို့ … မကောင်းဘူးလား….
rose of sharon October 28, 2009 at 12:00 AM
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ တကယ်ဘဲ ကမ္ဘာပျက်မှာလား
momiji October 28, 2009 at 12:13 PM
i ll write later.
မေဇင် October 28, 2009 at 2:43 PM
တကယ်ဖြစ်မှာလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးဖို့တောင် ကြောက်တယ်..။
tg.nwai October 28, 2009 at 5:11 PM
အဲလိုလား..သူများတွေ ဘာလုပ်နေမလဲ နည်းနာလာယူသွားပါတယ်.. အင်တာနက်က ပြုတ်ကျကျနေလို့ ဘလော့ဂ်တွေနဲ့ နှစ်ရက်လောက် ဝေးသွားတာနဲ့ ရောက်လာတာ နောက်ကျသွားတယ်..သက်ဝေ ရေးခိုင်းလို့ စောင့်ဆိုင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်...:)
သင်းနွယ်ဇင် October 28, 2009 at 8:56 PM
ကွန်ပျူတာရှေ့မရောက်တာ တပါတ်လောက်လို့ရှိလို့ပါ အပေါ်က သူငယ်ချင်းကြီးရေ.. (သူများတွေရောက်တာ ဖြင့်ကြာလှပြီ သူကအခုမှရောက်ပြီး... ဟင့်။)
သတိတယTag လို့ကျေးဇူးနော် သက်ဝေ..
ကလေးတွေစာမေးပွဲပြီးရင် ကြိုးစားပြီးရေးပေးမယ်။း)
မီယာ October 29, 2009 at 3:49 AM
အင်တာနက်နဲ့ ပြတ်နေလို့ မန့်ရမှာ နောက်တောင်ကျနေပြီ မသိလိုက်ဘဲ သေသွားရရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်တယ် အမသက်ဝေ မခံစားရတော့ဘူးပေါ့
မမရေ.. ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာကြီးတကယ်မပျက်ပါဘူးတဲ့.
မီးဆီ ဖောဝပ်မေးလ်ရောက်လာတာပဲ. အဟဲ
မီးလည်းရေးရဦးမယ် ဒီတက်ဂ်ပို့စ်လေး.. ပညာလာယူသွားပါတယ် မမသက်ဝေ။
မမရဲ့မေမေလားမသိဘူး မီးနဲ့မွေးနေ့တူတာ.း)
အပြုံးပန်း October 29, 2009 at 11:08 PM
အင်း... စိတ်ကူးကြည့်ရမှာတော့ အခက်သားပဲ။